Golaha ammaanka Qaramada midoobay oo ka shiray arrimaha Soomaaliya | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Top News Golaha ammaanka Qaramada midoobay oo ka shiray arrimaha Soomaaliya
Baladweyne(HNN)- Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan ka yeeshay arrimaha dalka Soomaaliya iyadoo kulankaasna khudbad loogaga dhagaystay ergayga Qaramada Midoobay James Swan iyo ergayga Midowga Africa Francisco Madeira.
James Swan ayaa ka hadlay horumarka laga sameeyey ansixinta sharciga doorashooyinka iyo hawlgalladii ciidanka ee Shabeellada Hoose iyo qabsashada magaalada Jannaale.
Golaha Ammaanku waxa uu ugu baaqay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay wada hadlaan.
Dawladda Maraykanka sarkaalka u hadlay ayaa ugu baaqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qabto kulanka Golaha Amniga Qaranka oo ay ku wada jiraan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Previous articleDacwaddii muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo dib loo dhigay
Next articleWasiirka Ganacsiga Soomaaliya oo ka hadlay saameynta COVID-19 ku yeeshay Ganacsiga dalka